Last Updated on Sunday, 13 August 2017 02:55
Last Updated on Tuesday, 25 July 2017 17:20
Last Updated on Friday, 07 July 2017 03:53
के हो जातिय युद्द ?
छबीसुब्बा साम्बहाम्फे लिम्बु ,
संसारमा अहिलेसम्म भएका युद्दहरु जातीय युद्द नै हुन । प्रकृतिहरु फरक हुनु अर्कै कुरा हो । एक देशका जाति र अर्को देशका जातिहरुबीचमा युद्दहरु भयो र हुँदैछन । हिन्दू र मुस्लिमहरुको युद्द जारी छ, क्रिश्चियन र मुस्लिमहरु पनि लडिरहेकै छ । काला र गोराहरुको हिंसात्मक युद्द टुंगो लागेर शीतयुद्दमा परिणत भएको छ । हरेक देशमा रहेका विभिन्न जातिहरुबीच सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरु फरक रहेकोले तिनिहरु बीचमा कायम रहेका सभ्याताका द्वन्द्वहरु अन्त्य भएका छैनन ।
नेपालमा भैरहेका द्वन्द्वहरु पनि सभ्यताकै द्वन्द्वहरु हुन । यो अहिलेको नयाँ बिषयवस्तु होइन । पृथ्वी नारायण शाहले विभिन्न संस्कृतिहरुबाट चल्दै आएका मुलुकहरुलाई कब्जा गरेपछाडि लादिएको हिन्दू सांस्कृतिक सभ्यताले अन्य सभ्यताहरुमाथि प्रभुत्व जमाएर उपनिवेश लादे पछाडि नै सुरु भएको द्वन्द्व हो । हिन्दू सम्प्रादयभित्र पनि खास गरेर तीनखालमा वर्गहरु थिए । (१) शाह/राणा शासक वर्ग (२) उच्च घरानाका बाहुन वर्ग (३) मध्यम तथा निम्न मध्यम बाहुन समुदाय । २००७ साल अगाडि राणा र शाहहरुले शासन गर्दथे । त्यो सत्तामा बाहुनहरुको कुनै पनि तहमा पहुँचको गुञ्जायस थिएन । त्यसकारण उच्च घरानीया बाहुनहरुले मिलेर पार्टी बनाए, त्यो पार्टीको नाम नै नेपाली कंग्रेस हो । यही पार्टीको नेत्रित्वमा आलंकारीक प्रमुख रहेका शाहसँग मिलेर उच्च घरानाका बाहुनहरुले राणाशासनको विरुद्दमा क्रान्ति गरेर २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भयो । यो क्रान्तिमा बाहुनहरुले पूर्व पश्चिमका लडाका जातिहरु लिम्बू, राइ, मगर, गुरुङ आदी सबैलाई समेटेका थिए । खासमा यो लडाईंं एउटै हिन्दू संस्कृतिका दुइवटा जातिहरुबीचमा भएको थियो ।
२०१७ सालमा लामो समयसम्म आलंकारीक प्रमुखकोरुपमा रहन वाध्य पारीएका शाह वंसलाई नेपाल आफ्नै पुर्ख्यौली विरासत जस्तो लागेको थियो । त्यसो हुनाले राजा महेन्द्रले वहुदलीय व्यबस्थालाई खारेज गरेर आफ्नो एकलौटी शासन लागू गरे । यो पनि शाह र बाहुनबीचको अन्तर्द्वन्द्व नै थियो । बाहुनहरु त्यतिबेला पनि सत्तामा आफ्नो सर्वोच्चता चाहन्थे । कम्यूनिष्टहरुको संगठन २००६मा पुष्पलालको नेत्रित्वमा बनेता पनि उनी निर्वासनमा रहेकाले देशभित्र खासै संगठन बन्न सकेको थिएन । कांग्रेसीहरुको राजसंस्थाप्रतिको तीब्र आक्रमण र उनीहरुलाई भारतीय सहयोगको निरन्तरता रहेकोले त्यसलाई काउण्टर गर्ने हेतुले राजा महेन्द्रले रचेको कम्यूनिष्टहरुको एउटा संयन्त्र थियो जसको अहिलेको बिकसीत रुप नै नेकपा एमाले हो । यसको काम राजतन्त्र भन्दा पनि बढी कांग्रेसलाई विरोध गर्नु थियो त्यसबेला । यो पार्टीमा प्राय: त मध्यम वर्गीय बाहुनहरु समेटीएका थिए । २०४६ सालको जनान्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको आड लागेर सहभागी भएपछि उनीहरु पनि सत्ताको साझेदार बने ।
संसारमै बनेका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु अवसरवादी देखी चरम अवसरवादी धारका हुन्छन । २०५२ सालपछि प्रचण्ड र बाबुरामको नेत्रित्वमा नेपालमा पनि कम्यूनिष्टहरुको एउटा चरम अवसरवादी धार देखापर्यो । यो पार्टीले नेपालका सडकछापदेखि चरम अवसरवादी बाहुनहरुलाई संगठीत गरेर वर्गसंघर्षको हिंसात्मक कोर्ष पुरा गर्यो । अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा कुनै पनि वर्गका बाहुनहरुको नत सांस्कृतिक उत्पीडन नै छ नत राजनीतिक उत्पीडन नै । किनभने यी समुदायहरुको चेतनाले शताब्दियौं अगाडि सत्ता जन्माइसकेको थियो र त्यो चेतनाबाट उनीहरुले सत्ताका लागि संघर्ष र क्रान्ति गरे र प्राप्त पनि गरे ।
अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको चेतनाबाट सत्ता खोज्ने भन्दा पनि अवसरबाट सत्ता खोज्ने प्रयासहरु जारी छन । सत्ताधारीहरु भनिरहेका छन कुनै पनि जातजातिले जातीय कुरा गर्नु हुँदैन, यसले भड्काव ल्याउछ, मुलुक तहसनहस हुन्छ, सामाजिक सद्भाव खल्बलिन्छ आदी आदी । हामी पनि कती सजिलै अल्मलिन्छौं, होत नि, साँची नै एकजातले अर्को जाति विरुद्दमा कुनै कुरै गर्नु हुँदैन, आन्दोलन गर्नु हुँदैन यसले सबै बातावरण बिग्रन्छ आदी सम्झेर क्रान्तिमा उठेको दीमागलाई मत्थर पार्ने कोशीश गर्छौं । यो सरासर हावादारी कुरा हो । राणा र शाहबीचको द्वन्द्व, बाहुन र शाहबीचको द्वन्द्व, उच्च घराना र मध्यमवर्गीय बाहुनहरुबीचको द्वन्द्व, हिन्दू मुस्लिम द्वन्द्व, क्रिस्टीयन र मुस्लिम, नाजी र याहूदी आदी बीचको द्वन्द्व चाँहीं जातीय, धार्मिक द्वन्द्व होइन ? यी द्वन्द्वहरुबीच भएका क्रान्तिहरुले देश दुनियाँ उथलपुथल भएन ? नेपालमा यो भन्दा अगाडि सम्पन्न भएका क्रान्तिहरुले देश र समाज विध्वंश भएन? समाजहरु तहस नहस भएनन ? क्रान्ति निरन्तर रहीरहेको छ कि त्यसले फड्को मारेर देश शान्ति र गतितिर अगाडि बढीरहेको छ? त्यसकारण अबको जातीय युद्दको अर्को कोर्षमा नेपाल जानैपर्छ । जुन जातीय युद्द बाहुनको बिरुद्दमा यहाँका उत्पीडित आदिवासी जनजाति राष्ट्रियताहरुको हुनेछ । यो युद्दलेमात्र हिन्दू सांस्कृतिक सत्ताको प्रभुत्व अन्त्य गरेर वहुलराष्ट्रिय सांस्कृतिक सत्ताको निर्माण गर्नेछ ।
सत्ता निर्माणको यो चेतनाबाट नेपालमा अब कुनै पनि वर्गका बाहुनहरुले क्रान्तिको नेत्रित्व गर्ने छैनन । किनभने उनीहरुले नेत्रित्व गर्ने क्रान्तिको कोर्ष सबै नै पुरा भैसक्यो । त्यसैले अबको उनीहरुको सबै योजनाहरु, नीतिहरु, कार्यक्रमहरु प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी नै हुनेछन । त्यसैले यो परिवेशभित्र अमुक्त जनताले चुनावमा जाने, राज्यबाट अलमल्याउन दिइने कुनै सार्वजनिक पदहरु नेताले खाने, जस्ता हर्कतहरु आँफैमा घातक छन । त्यसो भएको हुनाले सबै आदिवासी राष्ट्रियताहरुले आफ्नो सांस्कृतिक सत्ता निर्मणको लागि आमूल परिवर्तनकामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा जुट्न अनिवार्य छ ।
Last Updated on Saturday, 15 July 2017 14:48
Last Updated on Thursday, 29 June 2017 16:33